Ixesha leMac elizayo lingaThatha ii-Chips ze-ARM, ngokweNtlanganiso ebibanjelwe eCupertino | Ndisuka mac
Ixesha elizayo leMac linokuthwala ii-ARM Chips, ngokwentlanganiso ebibanjelwe eCupertino
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo siye safunda ukuba uApple wamema intatheli ezininzi kwitafile ejikelezayo ebibanjelwe eCupertino. Izihloko ezininzi ezinxulumene neMac zatyhilwa.Phakathi kwazo: isibhengezo samva nje se- Ukuhlaziywa kweMac Pro, ukubakho kwe- IMac enesikrini sokuchukumisa kunye nokufakwa kweeChips ARM Kwii-Macs ezizayo.Aba baprosesa batsha baya kuthatha indawo ye-Intel yangoku. Nangona kungacacanga kulo lonke ulwazi olupapashiweyo: ukuba ziya kutshintshwa nini kwaye ziya kugqitywa ngokupheleleyo okanye ngokuthe ngcembe. Abanye abasebenzisi bade bacinge ukuba ezinye iiMacs zinokuba zii-hybrids: ukuphatha ii-Intel kunye nee-chips ze-ARM ngaxeshanye.
Inkampani ayinazicwangciso zescreen sokuchukumisa iMac, okanye koomatshini abasebenza kuphela ngohlobo lweeprosesa ze-ARM, Isetyenziswe kwi-iPhone nakwi-iPad.
Nangona kunjalo, abaphathi bashiye bevula ithuba lokuba iitshipsi ze-ARM zinokudlala indima ebanzi njengeeprosesa zenkampani, into eyaqala ukuvela kunye neprosesa ye-T1 egunyazisa iTouch Bar entsha. these Pro.
Kwakhona, uMlawuli weNtengiso uPhil Schiller wanikezela Ukuphinda "hayi", xa ubuzwa malunga nokubona iMac ngetouch screen.
Enye yeengxoxo ezinde, kodwa kwanele ukuthi, ayisiyomfuneko inkulu kubaxhasi beMac Pro.
UPhil Schiller uqhubele phambili kwiinyanga ezidlulileyo, ukuba bayixabisile iMac ngescreen sokuchukumisa, kodwa emva kovavanyo oluninzi, ezi bezingakholisi. Ngokuqinisekileyo emva kolu vavanyo, bathathe isigqibo sokuphumeza i-Bar Bar kwi-Macs entsha.
Icandelo elifanelekileyo leendaba sisibhengezo sokusetyenziswa kwee-ARM Chips kwii-Macs zexesha elizayo.Yinyani ukuba inkampani ayizimiselanga ukubabuyisela ngokupheleleyo, kodwa ukuqala ukusebenza nabo. Ezi ziiChips ezinokusetyenziswa okuncinci kwaye kwezinye iimeko, zinezibonelelo ezingcono. Siqhele ukubona izakhiwo zenoveli kuyilo lweeMacs zethu, ezinje ngokumiliselwa kweFusion Drayivu. Ayimangalisi loo nto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ixesha elizayo leMac linokuthwala ii-ARM Chips, ngokwentlanganiso ebibanjelwe eCupertino
IResizer kunye ne-Super Eriser, ii -apps ezimbini zokufezekisa iifoto zakho ngaphantsi kwe-euro
UMlingo weSithombe esiShukumayo usivumela ukuba sicime nayiphi na imifanekiso